Da'dee ayey bisaduhu keligood wax cunaan | Bisadaha Noti
Marka bisadu dhalato, waxay si dabiici ah u dhadhamin doontaa cunnadeeda ugu horreysa: caanaha hooyada. Taasi waxay noqon doontaa waxa kaliya ee aad cuni doonto ilaa ilkahaagu bilaabayaan inay soo galaan, wax dhici doona qiyaastii afar toddobaad kadib. Kaliya markaa hooyadiis ayaa tartiib tartiib u joojin doonta naas nuujinta.
Marka waa muhiim in la ogaado da'dee ayay bisaduhu keligood cunaan, iyo raashinkee ayaynu siin karnaa inay diyaar ahaadaan markay wakhtigu yimaado.
1 Da'dee ayey bisaduhu keligood wax cunaan?
2 Sidee loo ogaadaa da'da bisadaha?
3 Maxay cuntaa bisadaha dhasha ah?
3.1 Maxaan siin karaa bisad cunug?
4 Sidee loo siiyaa bisad?
5 Maxey cuntaa bisad bil jirta?
6 Sidee loo baraa bisad inay kaligeed wax cunto?
7 Da'dee ayaan u malaynayaa inay bisaduhu wax cunaan?
Da'dee ayey bisaduhu keligood wax cunaan?
Waxay ku xirnaan doontaa wax badan tartanka, laakiin guud ahaan inta udhaxeysa bil iyo bar iyo laba bilood durba waxay leeyihiin daaman ku filan oo ay cunaan. Waxa dhacaya ayaa ah in da'daas ay weli da 'yar yihiin si ay u quudiyaan iyada oo ku xidhan hadba waxa, sidaa darteed waxaa lagula talinayaa in la siiyo cunto qoyan si ay ugu fududaato inay cunaan.
Haddii ay dhacdo inaad doorato inaad iyaga siiso quudin, waa inay u gaar ahaataa carruurta yar yar, maadaama hadhuudhku aad u yar yahay. Intaas waxaa sii dheer, waa muhiim inaadan keenin badarka, maadaama ay sababi karaan xasaasiyad.
Sidee loo ogaadaa da'da bisadaha?
Si maqaalkan aan kaaga dhigo mid waxtar kuu leh, waxaan kuu sheegayaa sida loo ogaado da'da bisad da 'yar, maaddaama toddobaad ka mid ah uusan cunin wax la mid ah kan kale ee bil ah.
0-3 maalmood oo nolosha ah: wuxuu leeyahay indho xiran, dhagaha oo daboolan iyo jiridda xudunta.
5-8 maalmood: dhegaha ayaa furan. Waxay bilaabi kartaa inay gurguurto laakiin inyar.
2-3 toddobaad: wuxuu bilaabaa inuu furo indhihiisa, oo buluug noqon doona (wuxuu ku dhammeynayaa furitaanka dhammaadka usbuuca saddexaad). Da'daan ilkaha ilmuhu way soo baxaan, kan ugu horreeya waa gunta.
3-4 toddobaad: bakhaaradiisuu soo baxayaa, oo durba geesinnimo buu ku socdaa, in kastoo uu wobbxoogaa yar yahay.
4-6 toddobaad: Premolar-ka, oo ah ilkaha u dhexeeya daaqadaha iyo biraha, ayaa soo baxa. Midabka ugu dambeeya ee indhaha ayaa bilaabi doona inuu soo muuqdo. Da'daan ayaa xayawaanku u nool yahay sida eey xun oo kale: wuu ciyaaraa, ordaa, seexdaa, mararka qaarkoodna wax cunaa.
4 ilaa 6 bilood: nolol caadi ah. Waxaad heli kartaa kan ugu horreeya qiiro, iyo ilkaha joogtada ahi way soo baxaan:
6 qalliin oo ku yaal daanka kore iyo 6 daanka hoose
2 canines oo ku yaal daanka kore iyo 2 daanka hoose
3 premolars daanka kore iyo 2 daanka hoose
Maxay cuntaa bisadaha dhasha ah?
Sidaan soo sheegnay, bisadda isla marka uu dhasho wuxuu si dabiici ah u raadin doonaa hooyo hooyadiis si ay caanoheeda ugu quudiso. Tani waa inay noqotaa cuntadaada ugu horeysa, maadaama ay tahay tan ugu muhiimsan. Waa midka kaliya ee leh dhammaan nafaqooyinka aad ubaahantahay si aad bilow wanaagsan uguhesho koritaanka iyo, sidoo kale, caafimaad wanaagsan.
Waa sidaas caanaha naaska runti waa dambas labbada maalmood ee hore, oo ah il aad u qani ku ah immunoglobulin (unugyada difaaca jirka ee ka ilaaliya fayraska, bakteeriyada, iwm ee sababa cudurada) (fikrad kaa siiya: caanaha isku-ururku wuxuu ka yar yahay 1 garaam litirkiiba, marka loo eego 40-50g / l ee dambar). Haddii eeygu aanu fursad u helin inuu caboAma hooyadu way dhimatay, ama way xanuunsan tahay ama ma rabto inay daryeesho - waa wax aad dhif u noqon kara, - waxay yeelan doontaa waqti adag oo ka badbaada.
Maxaan siin karaa bisad cunug?
Gabadhayda yar ee Sasha ayaa cabaysa caanaheeda, markay ahayd Sebtember 3, 2016.
Waa wax aad u badan in laga helo bisad wadada dhexdeeda, hooyo la'aan. Ina-adeerkay ayaa bisadayda Sasha ka helay sanandkii 2016 goob duurjoog ah, aniga lafteydana waxaan ka helay Bicho aan jeclahay meel ku dhow xarun caafimaad. Waxay ahayd maalmo uun; runti, weli isagu ma uusan furin indhaha; dhanka kale, wuxuu awalba bil jiray. Laakiin sidoo kale, soo bixidoodu ma sahlaneyn.
Waxay ahayd inaan xakameyno nafteena waxbadan, iskudayno inaanan qaboowno ama aad u kululaano, iyo wixii kahoreeya inaan sifiican wax u cunno, hadii kale way jiran karaan. Tani waa sababta markaad la kulanto bisad cunug, aad ayey muhiim u tahay inaad siiso caano badal ah inaad ka heli doonto iibinta rugaha caafimaadka xoolaha ama dukaamada xayawaanka, iyo inaad raacdo tilmaamaha ku qoran warqadda, 3-4 saacadood kasta (marka laga reebo habeenkii haddii uu caafimaad qabo: haddii uu gaajoodo wuu kula soo socodsiin doonaa, ha ka welwelin).
Haddii aysan jirin hab lagu helo caano beddel ah, waxaad isaga siin kartaa isku-darka caanaha yar-yar ee guriga lagu sameeyo:
250ml caano dhan oo aan lahayn laktoosi
150ml kareem culus
1 jaallo ah (oo aan cad lahayn)
Hubso inuu diiran yahay, qiyaastii 37ºC. Haddii ay qabow tahay ama ka kulul tahay isagu isagu ma doonayo, taasna ma aha in la xuso in aysan dabiici ahayn in sidan oo kale loo siiyo.
Sidee loo siiyaa bisad?
Kitty waa inuu bilaabaa cunista cunnooyinka adag ee jilicsan qiyaastii usbuuca saddexaad-afraad ee dhalashada. Da'daan indhihiisu way kala furnaan doonaan, oo midab buluug ah oo qurux badan leh, wuxuuna ku socon doonaa kalsooni iyo kalsooni badan. Qaarkood xitaa waa lagu dhiirrigeliyaa inay ordaan, sidaa darteed mar dambe ma rabi doonaan inay ku jiraan sariirta / sanduuqa.
Hadduu la joogo hooyada, waxay daryeeleysaa inay u sheegto inaysan mar dambe caano siin doonin markuu doono, inay tahay waqtigii uu waxyaabo kale cuni lahaa. Laakiin haddii uusan nasiibkaa ahayn, markaa waa inaad noqotaa kan caano siiya waxaan u maleynayaa si ka duwan. Waxaan kuu sheegi doonaa sidaan ku sameeyay:
Toddobaadka ugu horreeya ee naas-nuujinta: 4 dhalo + 2 jeer oo ah pates loogu talagalay kittens maalintii
Toddobaadka labaad: 3 dhalo + 3 jeer oo khamri ah
Toddobaadka seddexaad: 2 dhalo + 4 jeer oo shaah ah
Laga bilaabo usbuuca afaraad iyo ilaa labo bilood: 6 jeer oo jeer oo badeecooyin ah, qaar caano lagu qooyay
Maxey cuntaa bisad bil jirta?
Iyada oo la tixgelinayo, guud ahaan, kittens-ku waxay bilaabaan inay muujiyaan xiisaha cuntada bil kadib markay dhashaan (in kastoo ay dhici karto inay jiraan qaar aan doonayn inay joojiyaan cabitaanka caanaha ilaa laba bilood), aad baa loogu talinayaa in, 30 maalmood ka dib, waxaad siinaysaa iyaga astaamo (cuntada qoyan) ee kittens. Si ay iyaguna u yeeshaan horumar wanaagsan, waxaan kugula talinayaa inaad doorato mid tayo wanaagsan leh oo leh hilib badan (oo aan ka yarayn 70%).
Waxaad sidoo kale siin kartaa quudin lagu qooyay caano beddel ah, laakiin khibrad ahaan waxaan kugula talinayaa inaad siiso daasado, maadaama ay aad ugu fududaan doonto inuu cuno.
Sidee loo baraa bisad inay kaligeed wax cunto?
Bisadu waxay wax ku barataa iyadoo ku dayaneysa hooyada iyo walaalaheed. Haddii uusan iyaga la noolaan, bisadaha kale ayaa macallin u noqon kara, laakiin haddii kan yar yahay kan keliya ee aad guriga ku haysatid, waa macquul in marka hore waa inaad ka caawisaa inuu barto cunista.
Haddii aad isku aragto xaaladan, qaado wax yar oo cunto ah - haba yaraatee waxba, sida madaxa kabriidka - afkaagana geli ka dibna si tartiib ah u xir laakiin si adag. Dareen ahaan, wuu liqi doonaa ka dibna waxay u badan tahay inuu keligiis cuni doono.
Da'dee ayaan u malaynayaa inay bisaduhu wax cunaan?
Waxay kuxirantahay nooca quudinta ay tahay: haddii ay qoyan tahay, in pateth, waxaad cuni kartaa laga bilaabo toddobaadka saddexaad ama afraad; Dhinaca kale, hadday qalalan tahay, goortaad calalinaysid, waa inaad sugtaa laba bilood si aad u bilowdo bixinta, iyo xitaa markaa waxaa laga yaabaa inaad ku qoyso biyo si ay kuugu fududaato.
Waa muhiim inaad ogaato taas ha ku degdegin inaad ka soocdo hooyada iyo kittens-ka. Way ogaan doontaa goorta carruurteeda yar ay joojin karaan cabitaanka caanaha - sida caadiga ah, 2 bilood, laakiin waqti yar ayey ku qaadan kartaa, gaar ahaan haddii ay yihiin noocyo waaweyn sida Maine Coon ama Kaymaha Noorway-. Laga bilaabo 3-4 bilood, kittens waxay awoodi doonaan inay cunaan quudinta qallalan iyada oo aan dhibaato jirin, maadaama ilkahoodu ay dhammayn doonaan horumarkooda si dhakhso leh: hal sano jir.
Waqtigu si dhakhso ah ayuu udhaafaa, waxaan kugula talineynaa inaad marwalba kamaradaadu diyaar u noqoto qabsadaan daqiiqadahaas qosolka badan laga bilaabo caruurnimada jilicsan ee saaxiibkaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bisadaha Noti » Bisadaha » Cuntada » Da'dee ayey bisaduhu keligood wax cunaan
141 faallooyin, ka tag taada
Waad salaaman tihiin, waxaan hayaa afar kittens oo hada bil jirsaday oo midkood uu doonayay inuu cuno cunada hooyadood.Taasi miyay calaamad u noqon kartaa inay diyaar u yihiin cunida iyo inay caano ka baxaan?
Ku jawaab Antonella Bazan
Haa, runtii. Hadda waxaad bilaabi kartaa inaad siiso quudin biyo lagu qooyay, ama daasado loogu talagalay kittens. Laakiin ilaa laba bilood waa lagama maarmaan inuu u cabo caanaha hooyadiis waqti ka waqti.
Waad salaaman tahay, waxaan qaatay bisad yar oo qiyaastii bil ah, way ka tageen iyada oo laga tagay, iyadu ma garato sida wax loo cuno ama waxay xiiseyneysaa inay sidaa sameyso, waxaan siiyaa quud qoyan iyo hilib dhulka ah iyo waxba, waxaan ku qasbanaaday inaan iibsado caano gaar ah loogu talagalay kittens oo iyada siiso dhalo, Waxa aan ogahay Way igu adag tahay tan iyo markii aan shaqeynayay maalintii oo dhan, maxaan sameyn karaa si aan keligey wax u cuno ??? Waxay umuuqataa caafimaad qab iyo feejignaan aad uqurux badan, dhibaatada kaliya ayaa ah marka ay timaado cunida, taas oo 100% igu tiirsan
Ku jawaab Leidy
Da'daas bisaduhu waxay u baahan tahay qof siiya iyada, ugu yaraan illaa ay ka gaarto 2 toddobaad ka badan. Waxaad sifiican u weydiisan kartaa qof aad jeceshahay inuu arko haddii ay iyagu la wareegi karaan. Waxaad isku dayi kartaa inaad siiso cunno bisad qoyan, ama cunto bisad qalalan oo caano lagu qooyay, laakiin wali wey kayartahay iyadu kaligeed wax ma cuni karto.
Waad salaaman tihiin, waxaan hayaa bisad 2 bilood jir ah laakiin wali kaligeed wax ma cuno. Waxaan galiyay cunto bisad biyo ku qooyay, caano bisad mana daneeyo midna ... Waa inaan siiyaa dhalada iyo cuntada. Durba waan daalay maxaa yeelay waxaan ku jiray xaaladan tan iyo markii aan jiray 10 maalmood, mararka qaarna ma haysto waqti.
Waxay iga caawineysaa ma garanayo waxa aan sameeyo si aan kaligeed wax u cuno. Waxaan sidoo kale isku darsaday cunnadiisa iyo gasacadaha loogu talagalay bisadaha waxyarna wuu cunaa laakiin ma wada ahan.
Maxaan sameeyaa ??
Mararka qaarkood kittens waxay u baahan yihiin inay cabaan caano bisad muddo dheer. Ma isku dayday inaad siiso tuna? Ahaanshaha cunto jilicsan, ma taabaneyso inay dhibaato ka haysato ruugitaankiisa.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, booqashada dhakhtarka xoolaha ma dhaawici doono, maxaa yeelay wuxuu yeelan karaa af ama calool xanuun.
m. cadceed dijo
Migatita waxay umushay 11-keedii waxaan haystay 2 ilmood oo qurux badan waxaan rajaynayaa inay sideeda oo kale yihiin mudo 3 todobaad ah waxay bilawday inay rabto inay cunto maraq iyo maraq inkasta oo ayna waligeed u oggolaan inay hooyadeed nuugto hooyadeed oo korsatay yorsai.
Ku jawaab m.sol
Da'daas qaar waxay bilaabaan inay tijaabiyaan noocyo kale oo cunto ah, laakiin ilaa 2 bilood ama waxay sii wadi doonaan inay cabaan caano waqti ka waqti.
Waad salaaman tihiin, bisadeyda ayaa dhashay 5 nirgo 15 maalmood ka hor, waxay ku jireen sanduuq u dhow aaga jikada, laakiin hada waxay rabtaa inay u rarto meel sariirta hoosteeda ah, maxaa sabab u noqon kara? Ma jeceshahay booska mise waa iyaga oo da 'weyn?
Waxaa laga yaabaa inaadan jeclayn booska. Jikada waa qol ay dadku waqti badan ku qaataan, laakiin qofna sariirta hoosteeda ma joogo 🙂.
Waad salaaman tihiin, maalmo ka hor waxaan la kulanay bisad qiyaastii bil ama bil iyo bar ah, waxaan bilaabay inaan siiyo dhalada sedexdii saacadoodba mar laakiin sifiican ayuu u qaatay kaliya labada ama sadexda maalmood ee ugu horeeya mana doonayo mar dambe, waxaan ku bilawnay baatiga iyo kiimikada bisadaha wuuna cunaa wax weyn dhibaatada waxay tahay ma ogin inta jeer ee aan siino isaga, hadii aan siinayno wax badan ama wax yar
Waad salaaman tahay nuuriya.
Way fiican tahay inaad ka tagto quudiyaha had iyo jeer isagoo buuxa, maxaa yeelay xayawaankani waxbay cunaan wax yar inbadan maalintii 🙂.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, hadaadan rabin ama aadan had iyo jeer uga tagi karin si xor ah oo la heli karo, qadarka lagu taliyay iyadoo loo eegayo da'daada iyo culeyskaaga ayaa lagu muujiyay boorsada quudinta, laakiin in ka badan ama ka yar waxay u dhigantaa qiyaastii 25 garaam maalintii (waa inuu jiraa 5 jeer 24kii saacba mar).
5 jeer oo ah 25grs. maalin kasta miyaanay xad-dhaaf ahayn?
Jawaab Francisco de la Fuete
Waad ku mahadsan tahay weydiintaada, maxaa yeelay habkaas ayaan ku arki karay inaan faallooyinkeyga ku qortay. Waxaan rabay inaan dhaho, qiyaastii 25 garaam maalintii waxay ku faaftaa 5 jeer.
Hada waan saxay.
Waad salaaman tahay, waxaan hayaa bisad yar oo aan uga tagey hooyadiis sidii dhalasho cusub, wuxuu qarka u saaran yahay inuu bil gaaro oo uu ku quudiyo caano uumisay, laakiin maadaama uusan rabin inuu wax cabo, ma fiicnaan doontaa in la bilaabo in la siiyo dhadhanka cuntada ?
Ku jawaab Yasna
Haa, da'daas waxaad bilaabi kartaa cunista quudinta bisad qoyan, ama quudka lagu qooyay caano ama biyo.
Waad salaaman tihiin, waxaan haystaa 5 ilmood oo bil jira ah oo iyagu keligood wax cunaya oo cabaya biyo, ma sii ahaanayaan oo kama soo baxayaan sanduuqooda hooyadoodna ahmiyad gaar ah siinin iyada, waxay rabtay inay ogaato haddii aan gaarsiin karo iyaga mulkiilayaashooda. Mahadsanid
Kittens waa inay la joogaan hooyadood iyo walaalahood ugu yaraan laba bilood. Xitaa hadday kaligood cunaan keligood oo aysan istaagin, waxay u baahan yihiin inay ogaadaan waxa xadka bulshada ah, oo ay ka mid yihiin: sidee iyo goorma ayaan la ciyaari karaa qof, sida daran ee qaniinyadu u noqon karto, markaan joojiyo inaan dhibaateeyo dadka da'da ah, .
Aasaaskan la'aanteed, suurtagalnimada in aad ku dambayso dhibaato ku abuurta qoyskaaga cusub waa mid aad u sareysa.
Waad salaaman tahay, waxaan haystaa bisadaha yar yar ee bil jira hal bilina ma aqaano hadii aan bilaabi karo quudintooda cunnooyinka adag sida gatarina ama croquettes ... ama hadaan ku maydhan karo wax quusiya mahadnaq iyo salaan.
Ku jawaab Lucia Estraño
Waa salaaman tahay Lucia.
Haa, muddo bil ah ayay ku bilaabi karaan cunnooyin adag, laakiin waxay uga wanaagsan yihiin inay ku bilaabaan quudis ama quudin biyo ah.
Wixii boodada, sheygoodu wuxuu noqon lahaa inay sugaan illaa ay ka gaarayaan laba bilood, laakiin dabcan, ma la joogi doonaan iyaga bil. Waxaad sameyn kartaa waxyaabaha soo socda: liin jarjar xaleef oo ku rid dheri biyo ah, illaa ay ka kareyso. Kadib, ku shub biyahaas (jeexjeexyada la'aan) weel, sug inta ay kululaanayso oo ay u maydhinayso kittens-ka.
Aad ayey muhiim u tahay inaad si fiican u qalajiso kadib, khaasatan haddii aad tahay xilliga qaboobaha, maadaama haddii kale ay ku qaboobi karaan.
Waad salaaman tahay bisha soo socota waxaan jeclaan lahaa inaan qaato bisad ay ii soo bandhigeen. Ma aqaano hadii aan aqbalo madaama aanan la ogeyn oo waxaan ka baqayaa in kan yar uu dhibaato kala kulmo markii uu ka kala tagayo hooyadiis inuu cunada joojiyo ama inuu caano cabo hooyadiisna aysan heysan naas nuujiso.
Goorma ayaa bisadaha hooyadiis laga sooci karaa?
Maxaan u maleynayaa inaan ku siin karo?
Bisadaha waxaa lagu kala tagi karaa hooyada laba bilood. Da'daas waxay horeyba u cuni karaan cuntada bisadaha dhib la'aan.
Salaan kadib waxaan haystaa bisad 2 usbuuc jir ah, maxaan ku quudiyo? Horeba da'daas ma u baahan yihiin baahidooda keligood?
Da'daas waa inaad qaadataa dhalo caano ah oo loo yaqaan 'kittens', oo laga bilaabo usbuuca 3aad ama 4aad waxaad bilaabi kartaa inaad siiso quudinta kittens-ka lagu qooyay caanaha - bisadaha.
Weli wuxuu u baahan yahay caawimaad yar si uu naftiisa u nafisto, haa. Cunto kasta ka dib, waa inaad ka gudubtaa faashad ama cudbi qoyan biyo diirran si aad u kaadiso oo aad u saxarooto.
Mudo intee le'eg ayaan ku suganahay in aan u sii gudbiyo cudbiga isaga?
Muddo daqiiqad ah ayaa ku filnaan doonta. Salaan iyo mahadsanid.
Waa salaaman tahay, todobaad ka hor waxaan ardaaga ka helay bisad ardaaga, waxaan is idhi ma taabanaayo waayo waxaan u qaatay inay qaadatay hooyadeed. Waxyar kadib waxaan arkay hooyada, oo dhul ahaan ahayd. Waxaan siiyay cunto qoyan si ay u noqoto mid naxariis iyo saaxiibtinimo leh ... wuu cunay. Muddo ka hor markii aan kaligay la kulmay bisadda, isaguna waa igu kor ciyey. Ma doonayo inaan kala sooco oo waan ogahay inay bisadu tahay xayawaanka qof. Miyaan iska yeel yeeli karaa in ay bisadu taydaydu leedahay inkasta oo hooyadeed ay ka shakiso waxbarista aadanaha? Ma aanan dooneynin inaan kugu carqaladeeyo firfircoonidaada walaalladeed ... Maxaan filan karaa?
Waad ku kasban kartaa kalsoonida qofkaaga yar adoo siinaya quud qoyan, maadaama ay urayaan wax ka badan qalalan oo ay uga macaan yihiin. Si tartiib tartiib ah ayaad u arki doontaa sida ay kuugu soo dhowaan doonto.
Geesinimo, waxaad arki doontaa inaad guuleysan doontid
Fiid wanaagsan, waad ku mahadsan tahay qoraalkan, waxaan qaatay bisad yar oo aan ka helay iyada oo dariiqa gebi ahaanba keligey ah, waxaan u geeyay dhakhtarka xoolaha wuxuuna ii sheegay inuu jiro 18 maalmood oo keliya, waxaan u iibsaday qaaciidadiisa waxaanan moodayay isagu ma badbaadi doono habeenka ugu horeeya, nasiib wanaag weli wali hal toddobaad ayaa ila jira, sidaa darteed waxaan u soo jeestay halkan markaan cuno cunno adag, salaan!
Waad ku mahadsantahay, uguna hambalyeeyay xubinta cusub ee qoyska 🙂
Saddex maalmood ka hor godkayga khamaarka ayaa ka muuqday beertayda. Waxaan geynay dhakhtarka xoolaha wuxuuna noo sheegay inuu jiro qiyaastii 20 maalmood, laakiin ma uusan sharixin inaan ka caawiyo sidii naftiisa u nafisi lahaa. Maxaan sameeyaa habeenkii ugu horeeyey ee uu saxaroodo laakiin wali ma uusan sameynin
Waa salaaman tahay Juliana.
20 maalmood waa inaad wax cuntaa 3-4 saacadood kasta, dhalo caano u ah kittens, ama haddii aad ku guuldareysato inaad isku qasto koob caano dhan ah (doorbidayo laaktoos-la'aan), ukunta ukunta (ma aha tan cad) iyo qaado oo macmacaanka kareemka caanaha. Cunto kasta ka dib, waa inaad ka caawisaa inuu naftiisa iska nafiso adoo marinaya faashad diirran oo ku saabsan aagga xubinta taranka, laga soo bilaabo dhammaadka caloosha oo hoos ugu dhacaya lugaha.
Da'daas waxaad bilaabi kartaa inaad siiso cunno yar yar oo qasacadaysan, laakiin waa in si tartiib tartiib ah loo soo bandhigaa. Ilaa uu ka gaarayo bil iyo bar, waa inuu sii wadaa qaadashada dhalo.
Subax wanaagsan! Waxaan haystaa 4 kittens bil kasta, hooyadu waxay dhimatay Qorraxdayda yar. Su'aashaydu waxay tahay hadii aan siin karo cunto, waxay qaataan laba dhalo labada kalena ma doonayaan inay qaataan ...
Aad ayaan uga xumahay luminta bisadaada 🙁
Carruurtaada yar ee bil bil haysata waxay durba bilaabi karaan cunista cunnooyinka adag, sida cuntada qoyan ee loo yaqaan 'kittens' ama cunno loogu talagalay carruurta yaryar ee biyo lagu qooyay.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, uguyaraan ilaa lix toddobaad markuu jiro waxaa lagugula talinayaa inaad haysatid saxan ay kujiraan caano - loogu talagalay kittens-ka maxaa yeelay mararka qaarkood waxay jecelyihiin inay wax cabaan. Dabcan, laga bilaabo usbuuca 7aad ama 8aad waa inay keliya biyaha cabbaan.
Salaan !! Waxaan hayaa seddex bilood oo bil-jir ah, kitteydii, hooyadeed ayaa dhimatay iyo goobaha khamaarka ma rabaan inay caano cabaan ama wax cunaan, laakiin gabadheyda yar waxay siisay rooti aad u jilicsan oo ay cuntay iyo godadka qamaarka ayaa cunay. isla markiiba. cun rooti? Mise xanuun bay leedahay in la cuno? Maaddaama ay taasi tahay waxa xilligan u eg 🙁
Ha cq sameyn ……
Ku jawaab Yeimy
Hagaag, ma xuma sida oo kale, laakiin bil kadib waa inay bilaabaan cunista cunada bisadaha jilicsan, sidaan filayo qoyan. Dabcan, aad loogu qooyay caano ama biyo diiran, maxaa yeelay hadaanay ahayn, iyagu ma cuni doonaan.
Xitaa iyadoo sidaas ah, inta ay laqabsadaan iyo si aysan u gaajoon, waxaa wanaagsan inay sii wadaan cunista rootiga jilicsan. Laakiin u soco soo bandhig cunnada qoyan ee tartiib tartiib tartiib tartiib ah. Waxa kale oo aad isku dayi kartaa cuntada bisadaha qalalan, sidoo kale lagu qooyay.
Haye! Waxaan haystaa seddex kittens oo qiyaastii bil jir ah, hooyadood ayaa dhimatay waxaanan siiyay caano aan badnayn maxaa yeelay kama helin caano kittens-ka, waxaan ka qoynayaa waxay ku urursan yihiin caanahaas labadoodana sifiican ayey wax u cunayaan, laakiin kan kale ma sameeyo oo aad buu u ooyaa, iyo marka laga reebo waxaan u maleynayaa inay wax xun sameynayaan maxaa yeelay shuban bay hayaan hadda. Maxaan sameeyaa Waxaan dareemayaa inaanan daryeel fiican u hayn iyaga.
Caanaha lo'da ama idaha ayaa u muuqda kuwo u xun bisadaha. Laakiin markii aadan heli karin mid cayiman oo loo yaqaan 'kittens', ma jiro xulasho kale oo aan ka ahayn inaan iyaga ka dhigno annaga ... guriga Xusuusnow cuntadan:
150ml caano dhan
50ml oo biyo ah
50ml oo yogurt dabiici ah
Ukunta ukunta qaydhiin - oo aan lahayn wax cadaan ah-
Wax walba si fiican isku walaaq, xoogaa kululee ilaa diiran, oo u adeeg
Sikastaba, da'daas waxaad bilaabi kartaa inaad siiso cunno qoyan oo loogu talagalay kittens, si fiican loo jarjaray. Ama xitaa bisadaha qoyan ee qoyan biyo.
Waad salaaman tahay, waxaan hayaa bisad yar oo ay i siiyeen bil ama wax la mid ah, waxaan doonayay inaan ogaado haddii ay awalba cuni karto cunnooyinka adag (tuna, digaag, hilib shiidan), mise wali way aad u yartahay, hadii ay dhacdona ma awoodo sii, waa maxay cuntooyinka ila taliya. Mahadsanid
Ku jawaab dalma
Waad salaaman tahay Dalma.
Haa, bil gudaheed waxaad ku bilaabi kartaa cunista cunnada adag ee adag, sida gasacadaha.
Lix ilaa toddobo toddobaadna waa suurtagal in la siiyo hilib shiidan.
Labadaydu waa 15 maalmood .. Laakiin hooyadeed malahan waxa caano ah ee aad ku taliso
Jawaab Hector David
Waxaa ugu fiican in la cabo caano loo diyaariyey kittens, oo lagu iibiyo rugaha caafimaadka xoolaha iyo dukaamada xayawaanka.
Haddii aadan sinnaba u heli karin, tan waad u diyaarin kartaa isaga:
-150 ml oo caano dhan ah (laaktoos la'aan, doorbidayaa)
-50 ml oo biyo ah
-50 ml yogurt dabiici ah
-Raw jaallo ah (oo aan cad lahayn)
-Shiin yar oo kareem culus
Wax walba si fiican ugu qas, oo wax yar kulula, ilaa ay kululaato (qiyaastii 37ºC).
Salaan, iyo dhiirigelin 🙂.
Waad salaaman tihiin, waxaan hayaa bisad ilmaheeda la joogta, kittens-yada ayaa jira 1 bil oo ay soo baxaan oo ciyaaraan, waxaan doonayay inaan ogaado hadii ay lagama maarmaan tahay in la siiyo cunno marka laga reebo cuntada ay hooyadood siiso iyo hadii ay tahay inay bixiyaan iyaga biyo. Mahadsanid
Jawaab Silvia Petrone
Haa, markay jiraan hal bil ayey durbaba cuni karaan cuntada bisadaha. Waxaa sidoo kale si aad ah loogu talinayaa inaad bilowdo inaad siiso biyo.
Waad salaaman tahay sidee tahay waxaan badbaadiyay bisad yar shalay waxaanan doonayaa in aan korsado, wali wax walba way ka cabsaneysaa mar hadii ay ku dhawaatay in la dul maro, ma garanayo waxa aan ku siiyo si ay u quudiso madaama aysan waligeed bisad lahayn. , tee aad ku talin laheyd waa ilaa bil iyo bar, waxaan rajeynayaa jawaabtaada, mahadsanid.
Da'daas wuxuu horey u cuni karaa cunto adag (jilicsan), sida daasadaha yaryar ama cuntada yar yar ee biyo lagu qooyay.
Salaan, iyo hambalyo 🙂.
Waad salaaman tihiin, waxaan haystaa laba nirig oo bil-bil jir ah oo aan ku quudiyey caano bisadaha tan iyo markii ay dhasheen, waxaan bilaabay inaan siiyo iyaga waxaan u maleynayaa iyo Laatiin, midkood ayaa si fiican u cuna quudka oo uu cabaa biyo laakiin kan kale ma jiro Qaab uu wax u cuno, wuxuu kaliya doonayaa dhalada waxaan isku dayay inaan ku wado caanaha berkada laakiin midkoodna, si dhib ah uma siinayo dhalo si aan u arko inuu cuno isagoo gaajaysan laakiin waxba. Cabsi ma ahan inuu wax yar cuno oo uusan si fiican wax u cunin
Ma isku dayday inaad siiso cunto bisad qoyan? Hadday sidaas tahay, iskuday inaad siiso maraq digaag ah (laf la aan), ama baro (xoogaa xoog ah laakiin adigoon dhaawicin) wax yar oo qoyan ah. Fur afkiisa, geli oo xir. Xidh ilaa intaad liqayso.
Tani waa waxa aan ku sameyn lahaa kitteyda, oo hadda way cuntaa wax alla wixii ay dusha ka saaraan. Wax walba wuu jecel yahay: s
Haddiise aad aragto inaysan jirin wax jid ah, u gee dhakhtarka xoolaha si aad u aragto inuu qabo wax dhib ah oo ka horjoogsanaya inuu wax cuno.
Waad salaaman tihiin. Waxaan hayaa bisad yar oo jirta 3 wiig iyaduna waxay haysataa 4 ilmood oo yar yar laakiin waxay haysataa laba maalmood ama ka badan oo markay quudiso ay dhibto kana cabato xanuunkeeda, maxaan sameeyaa? Mahadsanid
Haddii kittens-yada ay jiraan 3 toddobaad, waxay bilaabi karaan cunidda cunnooyinka adag ee jilicsan, sida daasadaha cuntada bisadda qoyan.
Waxaad ku siin kartaa wax yar - aad iyo aad u yar - fartaada, adiga oo cuntada ku ridaya afkooda, adigoon riixin. Kaliya waxaad fureysaa afkeeda oo aad ku quudisaa.
Haddii ay dhacdo in aysan iyagu rabin, oo xisaabta lagu dareyno in hooyadu durba bilaabayso inay dareento xanuun markii ay naas nuujinayso, waa inaan ku adkaysano.
Ikhtiyaar kale ayaa ah inaad u iibsato caano kittens - lagu iibiyo rugaha caafimaadka xoolaha - iskuna day inaad ka cabto berkada.
Waad salaaman tahay Leon.
Muddo labo bilood ah ayaa kittens-ka mar hore cuni karaan keligey, waxaan u maleynayaa ama daasadaha cuntada bisadda qoyan. Haddii aadan rabin, waxaad ku qooyn kartaa biyo ama maraq digaag ah (laf la'aan).
Mahadsanidiin, Luis. 🙂
GUADALUPE WAALAN dijo
Laba bilood ka hor waxaan daryeelahayga ku haystaa 5 kittens, hooyadood ayaa ka tagtay markay dhashay ka dib laakiin aad ayey u adag yihiin, wax walba way ka baqaan oo markasta oo aan u imaado inaan uga tago cuntadooda meel walba ayey ku ordaan, su'aashaydu waxay tahay miyay cuni karaan buskud?
Jawaab GUADALUPE TORRELLY
Mudo laba bilood ah waxaad siin kartaa quudinta kittens biyo ku qooyay. Sidan ayay ula qabsan doonaan cabitaanka cuntada qaaliga ah.
Haddiise aysan rabin, waxaad siisaa cunno qoyan oo kittens ah, dhigna saxan biyo ah dhinacooda si ay u cabi karaan markastoo ay doonaan.
Shaki ayaan qabaa, waxaan hayaa laba kittiyaal oo seddex isbuuc jira (sida hooyaday sheegtay), iyo sida aan halkan ku aqriyay waxay durbaba bilaabi karaan cunista waxyaabaha qoyan, laakiin sida ay hooyaday sheegtay, maahan ilaa ay fanaankoodu soo baxayaan (taas oo waxay u maleyneysaa inaysan haysan). Maxaan sameyn karaa?
Bisadda hooyadu way iska indhatirtay iyaga 4 ama 5 maalmood ka hor. Oo hadda waxaan ku siinaynaa beddelka caanaha ee bisadaha. Waxaan ku siinaa saliinge. Miyaan beddelaa dhalo?
Goorma ayaan joojiyaa ka caawinta inuu musqusha aado?
Waad salaaman tahay Victor.
Haddii bisadda hooyadu ay si wanaagsan u daryeeli jirtay illaa iyo hadda oo aysan weligood dhibaato ka dhicin, xaqiiqda ah inay mar hore iska indhatirto kuwa yaryar waa sababta oo ah waxay ogtahay inay da 'weyn yihiin oo ay naftooda quudin karaan. Dabcan, waxaan u maleynayaa in cuntada qoyan ee loo yaqaan 'kittens' ama cuntada qalalan ee loo yaqaan 'kittens' ee lagu qooyay biyo.
Iyada oo seddex toddobaad ah looma baahna in la siiyo dhalo.
Aad baad u mahadsantahay Monica
Waad salaaman tahay, waxaan hayaa bisad yar oo 2 bilood jir ah, waxaan ka walwalayaa inay wax badan cunto ka dibna qurux badan, wax yar ayaan u adeegaa iyada oo waliba waliba ay sii wadato matagteeda, ii sheeg ma caadi baa? Ma aqaano waxa la sameeyo, waan ka walwalsanahay sababta oo ah waxaan u sujuudaa shareeraha
Jawaab Julissa Fernández Cueva
Waa salaaman tahay Julissa.
Waxaa laga yaabaa inaad qabto dulin caloosha ku jirta. Taladaydu waxay tahay inaad geysid dhakhtarka xoolaha si loogu daaweeyo.
Waa salaaman tahay, waxaan hayaa bisad 40 maalmood ka hor lahayd ooy ey lahaa, waxaan ku qasbanaaday in aan siiyo ka-hortagga uurka maxaa yeelay waxay bilowday inay kuleylka gasho, illaa qalliinka ay weli naas nuujineyso eeyooyinka, xaqiiqda ah inay kiniinno qaadato wax bay u qaban doontaa iyaga. ???
Waa salaaman tahay Patricia.
Mabda 'ahaan waxaan dhihi lahaa maya, laakiin waxaa fiican inaad la tashato dhakhtar xoolaha ah.
Waa salaaman tahay !!!! Waxay i siinayaan bisad bil iyo badh ah waxaanan la yaabay haddii ay lagama maarmaan tahay in iyada caano gaar ah loogu siiyo iyada oo dhalo ku jirta, xataa markay iyaduba wax cunayso ayay ila tahay think ..?
Ku soo jawaab Verònica
Bil iyo badh waxaad awalba cuni kartaa cunnooyinka adag (cuntada bisadaha qoyan, ama cuntada bisadaha qalalan ee lagu qooyay biyo).
Waad salaaman tihiin, waxaan qaadanay bisad yar, waxay noo sheegeen inay jirto 2 bilood, laakiin culeyskeedu waa 250 garaam, waa caadi oo waa iska caadi inayna ciyaarin, way huruddaa had iyo jeer, waxay u dhaqaaqdaa oo kaliya inay cunto cunadeeda iyo si ay u aado sanduuqa qashinka si ay nafteeda u nafiso. Waan ku qanacsanahay jawaabtaada. Carina
Miisaanka waa hagaagsan yahay, waana wax iska caadi ah inuu waqtiga intiisa badan ku qaato hurdada, laakiin haddii uusan ciyaarin ku dhowaad wax, waa sababta oo ah waxbaa ku dhaca isaga. Waxaa laga yaabaa inaad qabto dulin ku dhaca xiidmaha. Waa inaad geysaa dhakhtarka xoolaha si loo baaro oo aad u siiso daaweynta ugu habboon.
Waad salaaman tahay, fiiri, waxaan hayaa 5 kittens oo mar hore bil jira ... waxay leeyihiin ilko waxaan go aansaday inaan u soo iibiyo cunno bisad ah ... qaarbaa cuna ... bisaduna siiso caano isku mid ah ... iyaga inay cabaan caano oo ay cunaan mid ama mid kale ... maya Aad ayey u cunaan, waxay cunaan hadhuudh uun ... kagama dhaawaceyso xaqooda ... granite-ka aan ka iibsado waa mid aad uyar ... waxayna ku qabtaan saxaro sanduuqa ciidda. Mahadsanid
Waa salaaman tahay Evelyn.
Haddii hooyadu weli caano siiso, hagaag. Laakiin haa, muddo bil ah mar horeba waa inay bilaabaan cunista xoogaa xoog adag 🙂.
Waad salaaman tahay, waxaan hayaa bisad 16 bilood jir ah, waxay leedahay hypoplasia, iyadoo taasi jirto waxay ku nooshahay nolol caadi ah, way ku dhaawaceysaa inay caano cabto, waa inaad marmar u socotaa, salaan
Jawaab Rossana Parada
Caanaha lo'da ayaa bisadaha ka dhigi kara kuwo jiran. Si kastaba ha noqotee, haddii ay tahay laktoosi-la'aan ama u gaar ah iyaga, waad qaadan kartaa waqti ka waqti.
Haye! In ka yar usbuuc ka hor ayaan qaatay bisad yar, maadaama bisad saaxiibkeed uu lahaa bisad yar oo aysan la wada joogi karin dhammaantood, waan qabtay markii ay cunnada bilawday waxaan u maleynayaa inay qoyan tahay, laakiin waxyaabaha aan akhriyay, kama sameeyo ogow haddii aan sifiican u qabanay inaan si dhakhso leh isaga kala soocno hooyadiis (qiyaastii bil iyo usbuuc ka hor), wuxuu ku dhajiyaa maalintii oo dhan meowing, ma garanayo haddii wax ka khaldan yihiin isaga ama waa uun ilmo, waxaan jeclaan lahaa sidaada oo kale inaad talo i siiso, mahadsanid!
Kittens waa inay hooyada la joogaan ugu yaraan laba bilood. Muddo bil iyo toddobaad ah ayay cuni karaan daasadaha cuntada bisadda qoyan; quudinta qallalan weli si fiican looma calalin karo.
Hadduu ooyo waa inay ahaato gaajo, ama qabow awgood. Da'daan weli si fiican uma xakamayn karaan heerkulka jidhkooda.
WAXAAN LEEYAHAY BIL IYO QAAR KOOX AH LAAKIIN MA CUNTO INTA UGU BADAN BASABARKA, WUXUU KALOO RABAA IN UU CUNO CUNA AADANAHA SIDII KALUUNKA.
Bil iyo badh waxaa ugu fiican in la cuno cunug bisad qoyan, ugu yaraan muddo laba toddobaad ah.
Markay tahay laba bilood waxaad siin kartaa cunno yar yar, oo lagu qooyay biyo yar ama lagu qaso cuntada qoyan.
Suurtagal ma tahay in bisadu diirimaad hesho markay nuujineyso?
Bisadu waxay leedahay bisad 1 bilood jir ah.
Jawaab Armando Florez
Maya, macquul maahan. Da'daas weli ma uusan gaarin bisayl galmo, wax uu ku sameyn doono 5-6 bilood.
Waa salaaman tahay, waxaan hayaa bisad yar oo qiyaastii 3 bilood ah, iyaduba waxay leedahay ilko dhammaystiran, laakiin waxay u fiirsatay inaysan iskeed wax u cunin oo hooyadeed ay hadda dhimatay, maxaan ku samayn karaa si aan u quudiyo?
Ku soo jawaab Delaila
Waa salaaman tahay Delaila.
Da'daas waa muhiim inay mar hore keligeed wax cunto. Qasacadaysan ee kittens, si fiican u jar jartey. Qaado oo afkaaga geli; ka dibna si adag u xir. Caqligiisa ayay ku liqi doontaa.
Kani waa inuu ku filnaadaa inuu kiciyo rabitaankiisa, laakiin haddii kale, samee marar badan.
Haye, dhibaato weyn ayaa i haysata mana garanayo waxaan sameeyo. Aniga iyo qoyskeygu bisad ayaan ka soo qaadnay wadada, way uur laheyd waxayna bisadaha gurigeenna ku heysay muddo bil iyo bar ka hor ah, xalay bisaddi waa tagtay mana soo laaban. Ma aqaan waxa aan ku sameeyo bisadaha, waa lix iyaga ka mid ah oo cidina halkan ma haysato waqti ay ku quudiso labadii ama saddexdii saacadoodba mar, way na caawinaysaa, ma aqaan waxa aan ku quudiyo iyo waxa ku habboon.
Da'daas waa inay cunaan cunnada yaryar ee qoyan (daasadaha), ama cuntada bisadaha lagu qooyay biyo.
Haddii aadan daryeeli karin, waxaad mar walba qori kartaa calaamadaha 'kittens give away'. Waxaa laga yaabaa in qof xiiseynayo.
Habeen wanaagsan, waxaan rabaa in aan ogaado waxa raashinka ah ee noocyada ah ee aan siin karo bisadeyda yar ee jirta laba bilood iyo sida aan u bari lahaa in uu isku cafiyo ciidda. Mahadsanid.
Ku jawaab Astrid
Iyadoo laba bilood, ugu fiican tahay in la cuno cunto qoyan ugu yaraan saddex bilood. Way ka qaalisan tahay qalalan, laakiin maadaama ilkahaagu weli korayaan waxaa laga yaabaa inay yara adkaato in la calaliyo.
Ikhtiyaar kale ayaa ah in lagu qooyo quudinta qallalan biyo.
Iyadoo aan loo eegin waxaad siiso, waa inay noqotaa mid gaar ah.
Marka laga hadlayo noocyada, waxaan kugula talinayaa kuwa aan isticmaalin firileyda, sida Applaws, Acana, Orijen, Dhadhanka duurjoogta, True Instinct High Meat, iwm.
Ku saabsan su'aashaadii ugu dambeysay, ee maqaalkan Waxaan kuu sharaxeynaa sida wax loo baro.
Waad salaaman tihiin, waxaan haystaa bisad bil iyo 5 maalmood jir hooyadiis dhimatay iyadoo umushay sidaa darteed aniga ayaa aad u korsaday. Kittens-kaygu waxay u cabeen caano gaar ah kittens-ka oo aysan hooyadood nuujin karin laakiin maalmo ka hor waxaan u weecday cunnooyinka adag ee ilmaha, waxaan isku dayay inaan u qoyo sidii mid saafi ah oo aan ugu soo bandhigo waxyar aayar afkeeda, laakiin way diiday oo waxaan ku dhammeeyaa iyada quudinta dhalo. Maxaan sameyn karaa si aan uga caawiyo inuu barto cunista kaligiis?
Waxaan kugula talinayaa samir oo kusii adkeyso. Tusaale ahaan, waxaad siin kartaa dhalo subaxdii, laakiin markaa duhurkii isku day inaad qadar aad u yar oo cunug yar oo jilicsan ah afkeeda geliso. Ha u xirnaato adigoo si tartiib ah u riixaya ilaa uu wax liqayo, waa wax uu si dabiici ah u sameeyo
Markii la dhammeeyo, waxa caadiga ah ayaa ah inuu hadhow doonayo inuu keligiis wax cuno, laakiin haddii aad aragto inuusan weli doonayn, wax yar oo kale sii.
Si tartiib tartiib ah waa inuu keligiis wax u cunaa, laakiin haddii maalmuhu dhaafaan oo uusan samayn, u kaxee dhakhtarka xoolaha si aad u aragto inuu wax dhibaato ah qabo.
Waad salaaman tihiin, waxaan hayaa bishi yar oo reer Persia chinchilla ah oo 3 bilood jir ah iyaduna ma taqaano sida wax loo cuno, way leefleexdaa cuntada markay isku daydo inay qabato afkeedana way ka soo dhacdaa, hadda ka dib ma aqaano waxaan sameeyo. Waxaan aad uga walwalsanahay in ayada oo aan ahayn ilmo sidan ah ay caano kaliya quudiso.
Waxaan rabaa caawimaad, mahadsanid!
Waa salaaman tahay Stefanny.
Waxa ugu horeeya waxay noqon doontaa inaad fiiriso inaad wax dhibaato ah ku hayso afkaaga, sida xanuun tusaale ahaan. Marka waxa ugu horeeya ee aan kugula talin lahaa waxay noqon doontaa in la geeyo dhakhtarka xoolaha si loo hubiyo.
Haddii wax walboo hagaagsan yihiin, isku day inaad ku qasto cunnada yaryar ee qoyan (qasacadaha) iyo caano. Si fiican u jar si aad si dhib leh ugu calaliso. Haddii uusan weli cunayn, qaado xoogaa cunto ah oo caano lagu qooyay oo afka geli. Kadib si adag u xir laakiin adigoon dhaawicin.
Caqli ahaan, waa inay wax liqdaa, oo markay sidaa sameyso waxay u badan tahay inay ogaato inay jeceshahay oo ay kaligeed wax cunayso.
Haddii kale, iskuday markale inaad xoogaa cunto ah afkiisa gasho. Haddayna sidaas ahayn, waxay ila tahay inaad cunta ka siin karto sirinji (irbad la'aan).
Loren Sonkor dijo
Waad salaaman tahay, korsato cunug yar, waxaan u geeyay dhakhtarka xoolaha waxaanan u soo iibinay caano gaar ah laakiin wuu hurdaa maalintii oo dhan markii aan ka soo saarno gurigiisa aad ayuu u ooyaa, wuxuu jiraa qiyaastii 30 maalmood.
Ku jawaab Loren azcarate
Waa salaaman tahay Loren.
Da'daas waa iska caadi inay seexdaan 18-20 saacadood. Haddii uu in badan seexdo, waxay u badan tahay inuu qabo dhibaato caafimaad oo u baahan daryeel caafimaad xoolaha. Waxay u badan tahay inaysan waxba ahayn, laakiin markay timaado kittens-yada yar yar, ha isku kalsoonaan badan.
Fadlan, bisaduhu waa degdeg, hooyadu waxay dhimatay markii aan haystay waxaanan jeclaaday mid jira 15 maalmood oo aan saxaroon muddo 5 maalmood ah laakiin si wanaagsan ayuu wax u cunaa oo u seexdaa si caadi ah, maxaan sameeyaa? Waxaan hore u siiyay biyo la kariyey oo tufaax ah haddiiba ay xanuunto inkasta oo aanan arkin ha u caban
Jawaab Johan andres
10 daqiiqo ka dib cunista waa inaad ku kicisaa aagga futada oo cudbi ku qoyan biyo diirran, maaddaama da'dan uusan aqoon sida loo nafisto.
Si aad u caawiso, u duug caloosha (wareegga saacadda) caloosha 5 daqiiqo ka dib cuntada.
Haddayna sidaas ahayn, ku qas cuntadaada saliid yar (dhawr dhibic).
Haye! Bisadaydu waxay noqotay saaxiib oo waxay keentay saaxiibtiis guriga waxayna umushay 3 kittens. Waxay haystaan ​​20 maalmood. Shalay waxaan furay dukaan kalluunka laga iibiyo oo waxaan u keenay dhowr steaks si aan u siiyo waalidiinta cusub marka lagu daro cuntada qalalan. Goormaan siin karaa kalluunka (si wanaagsan ayaan u jeexi doonaa) carruurta?
Si fiican u jar jaban waxaad bilaabi kartaa inaad iyaga siiso hadda, laakiin waxaa fiican inaad sugto ilaa ay ka helayaan 10 maalmood oo dheeri ah 🙂
Waad salaaman tahay dhibaato ayaan qabaa. Bisadaydu waxay lahayd afar kittens, waxay jiraan 17 maalmood bisaduna mar dambe ma rabto inay naas nuujiso aadna waan uga walaacsanahay maxaa yeelay aad bay u ooyaan, mararka qaar bisadda xoog ayey ku haystaan ​​oo markaa kadib ayaa bisaduhu wax cunaan. Mise waxay noqon kartaa in bisadu aysan caano soo saarin?
Markay jiraan 17 maalmood waxay bilaabi karaan inay cunaan cunto adag, oo aad u jilicsan, sida cuntada bisadaha qoyan. Daaran maqaalkan waxay sharraxaysaa sida looga barto cunista adkaha adag.
Sikastaba, hadii ay cabi karaan caano seddex maalmood oo dheeri ah, ilaa ay ka gaarayaan 20 jir, waxay u noqon laheyd wax aad ugu wanaagsan iyaga.
Habeen wanaagsan, waxaan haystaa bisad yar, iyada ayaa la nadiifiyay July 21, 2017 laakiin iyadu waxay leedahay kubbad yar oo qayb ka mid ah qalliinka, waxay ku jirtaa caloosha, caadi ayey noqon doontaa.
Hadday bisaddu horseeddo nolol caadi ah, waxaad u jeeddaa boogta bogsatay. Waqti ka dib waxaad ogaan doontaa wax ka yar.
Waad salaaman tihiin, tani wax badan kuma lahan tan laakiin waxaan rajeynayaa inaad ku talinaysaan inaan keligay la noolaado hooyaday subaxdiina aan aado iskuulka hooyadayna ay shaqayso waxa dhaca ayaa ah in kittens-kayga (oo shan jira) ay yihiin 4 usbuuc. duq iyo hooyaday waxay umuuqataa mid xanuunsan madaama aysan rabin inay wax cuno dhawaanahanna ma doonayo inaan naas nuujiyo sidoo kale bisadaha ayaa ka baxsada sanduuqooda waxayna bilaabaan inay si aad ah u yaraadaan mana garanayo hadii 4-ta todobaad ay bisaduhu wax cuni karaan. Waad arki kartaa inaysan rabin inay ka tagaan tiirarka hooyadood, ma aqaano waxaan sameeyo waxaan ka baqayaa inay ku xanuunsadaan ama wax ku dhacay sidoo kale waxaan ka walwalayaa caafimaadka bisadeyda
Jawaab Brian Becerra
Kittens-ka 4 asbuuc mar ayey cuni karaan bisadaha qoyan, ama cuntada qalalan ee lagu qooyay biyo.
Marka laga hadlayo hooyada, iyada ayaa sifiican u aragta dhakhtarka xoolaha. Wuxuu awoodi doonaa inuu kuu sheego waxa ka khaldan iyo sida loo daaweeyo.
Muddo 20 maalmood ah waxaad bilaabi kartaa inaad siiso iyaga cunno qoyan oo loogu talagalay kittens, si aad u wanaagsan loo jarjaray, laakiin xaaladdan waxa ugu fiican ee la sameeyo waxay noqon lahayd in la geeyo dhakhtarka xoolaha si looga fogaado in dhimashadu mar dambe dhacdo.
Labadaydu waa bil iyo afar maalmood, hooyaday way ka maqan tahay oo way faallootaa laakiin saxaro ma samayso, maxaan sameeyaa? ??
Waa inaad ka gudubtaa suufka ku qoyan biyo diirran agagaarkiisa futada toban daqiiqo ka dib markaad wax cuntay.
Haddii kale, waxaad siisaa khal yar (nus malqacad yar). Tani waa sida ay tahay inuu u nafisto naftiisa.
Labadaydu waxay lahayd afar kittens wax walbana sifiican ayey u socdeen laakiin ilaa maanta timaheeda way lumayaan waa caadi ama way jiran tahay.
U jawaab Hannah
Maya, caadi maahan. Waxaan kugula talinayaa inaad u kaxeyso dhakhtarka xoolaha si loo baaro.
Waad salaaman tihiin, bisadeyda bisadaha ah ee 4 kittens, maanta waa 17 maalmood, waa hagaagsan yihiin, firfircoon yihiin, laakiin waxaan ka walwalsanahay in maalin kasta ay soo toosaan iyagoo indhahoodu ku dhagan yihiin laganzas iyo sidoo kale ...
Ku jawaab Yira
Waad ku nadiifin kartaa faashad ay ku qoyan tahay faleebo chamomile, saddex jeer maalintii.
Haddii aysan horumarin toddobaad gudihiis, waxaan kugula talinayaa inaad u qaadatid dhakhtarka xoolaha.
Haye! Waxaan haystaa labo kittens oo qiyaastii hal bil iyo badh ah mana rabaan inay cunaan cunnooyinka adag, quraarad keliya, waxay u ooyaan sida waalan laakiin xitaa ma isku dayaan inay raadsadaan cunto adag ... way ila talinayaan! Mahadsanid !!!
Ku jawaab Monica Restrepo
Waxaan kugula talinayaa inaad iibsato cunug bisad qoyan. Waxaad ku qaadataa wax yar farta, waxaadna galisaa afkiisa (si adag laakiin adigoon dhaawicin). Laba ama saddex isku day ka dib, waa inuu, dareenkiisa gaarka ah, keligiis cunaa. Haddii kale, waxaad ku qasan kartaa caano yar oo aan lahayn laktoosi.
Waad salaaman tihiin, waxaan jeclaan lahaa inaad i caawisaan, bisadaydu mar dambe ma rabto inay naas nuujiso bisadaha oo wali 13 maalmood ayey jiraan, waa inaan ku qasbaa oo ay ka ooyaan gaajo, maxaan sameeyaa?
Waad salaaman tahay Luisa.
Dhab ahaantii, kittens waa inay cabaan caano ugu yaraan hal usbuuc ka badan.
Haddii hooyadu aysan rabin inay siiso, waa inaad siisaa dhalo 3dii saacadoodba mar oo aad ku kicisaa aagga xubinta taranka faashad qoyan oo biyo diirran leh si ay naftooda u nafiso.
Caanaha kale ee ugu fiican ayaa ah kan ay iibiyaan oo lagu diyaariyo rugaha caafimaadka xoolaha iyo bakhaarrada xayawaanka, laakiin haddii aadan heli karin, waad sameyn kartaa isku darka:
50ml caano fadhi (aan macaaneyn)
Ukunta ukunta qaydhiin (aan cad lahayn)
Waad salaaman tahay, waxaan haystaa bisad 1 bilood iyo 1 toddobaad jir ah oo uu haddaba cuno cunto adag dhib la'aan laakiin waxaan ka walaacsanahay in ilkihiisu xoogaa waxyeello soo gaadho, maadaama aan weli si buuxda loo horumarin. Maxaan sameyn karaa?
Ku soo jawaab Francisca Lillo
Waxaad siin kartaa isaga cunno bisad oo qoyan, ama waxaad ku qasan kartaa kibble biyo yar. Laakiin ha ka welwelin ilkihiisa: haddii aad aragto inuu si wanaagsan wax u calaliyo, isagoo aan cabanayn, wax dhib ah ma leh.
Waad salaaman tihiin, bisadaydu waxay lahayd 4 kittens, maalin walbana bisad deris ah oo ayaamihii aan lahaa ayaga waan iska daayay, taas oo aan dhaygooda ku dhejinayno kuwayga waxaanan arkay bisadaydu inay daalan tahay oo ay xanaaqsan tahay waqtiga naas nuujinta. . Waxaa jira 8 ... qaarna waxay la hartay 20 maalmood, miyaan ka caawin karaa aq iyagu ma gaajoodaan oo bisadaydu way deggan tahay ???
U jawaab Elizabeth cordoba
Waa salaaman tahay, Elizabeth.
20 maalmood waxaad bilaabi kartaa inaad siiso iyaga cunno bisad oo qoyan (qasacado), kaligood ha ahaadeen ama ha ku qoyeen biyo diiran.
Haddii aysan wax cunin, farta wax yar ku qaado oo afkaaga geli. Caqli ahaan iyaga ayaa liqi doona. Halkaas waxay u badan tahay inay keligood wax ka cuni doonaan, laakiin waxaa laga yaabaa inay lagama maarmaan noqoto in cuntada dib loogu celiyo afkooda.
Si adag u samee laakiin si tartiib ah, adigoon waxyeello u geysan.
Waad salaaman tahay, bisadeyda 5-jirka ah, mar hore ayaan siinayaa bisadeeda cunto, waxay ku cabtaa caano bisad si aan habeen kaliya u quudiyo. Laakiin waxaan u arkaa in maalintaas aan door bidi lahaa taas halkii aan ka jeclaan lahaa bibi. Waxaa la bixin karaa oo keliya hal mar maalintii waxaan u malaynayaa inaanay weli ahayn? Boorsada ilmaha ee boqortooyada waxay dhigtaa 30gr 24kii saacba
Muddo 5 toddobaad ah waxaad mar hore cuni kartaa cunto adag oo jilicsan, 2-3 jeer maalintii. Ku qas caanaha bisadda illaa uu ka gaadhayo laba bilood.
Waad salaaman tihiin, laabatooyinku waa bil jira waxayna caano ka qaataan dhalo. Ma la joogaa waqtigii la joojin lahaa wax bixinta?
Bil kadib waxaad mar hore cuni kartaa bisadaha qoyan (gasacadaha), laakiin ku qas caanaha, si ay kuugu sahlanaato inaad la qabsato.
Waa salaaman tahay waxaan haystaa bisad yar oo ah 1 bilood iyo laba toddobaad shakigeyguna wuxuu yahay in maalintii ay saxaradeeda iyo saxaradeeda aad uga dhigto sanduuqa qashin qubka laakiin habeenkii ayaa iga dhigaya mana garanayo sababta ... Iyo mid kale wuxuu siinayay caano bilaa laaktoos ah waana iska saaray waan gartay in la isticmaalo marar badan maalintii oo aad u jilicsan ... Caanaha waa lama huraan
Ku soo jawaab Paty
Iyadoo lix toddobaad maya tahay, caano looma baahna 🙂. Dabcan, waa inaad bilowdaa biyo cabid. Waxaad ku qooyn kartaa cuntadooda biyo diiran si aysan u dhadhamin wax aad u yaab badan.
Waad salaaman tihiin, laba todobaad ka hor waxaan ka helnay qaar ka mid ah kittens kursi curis duug ah oo ku yaal barxada guriga hooyaday, ma ogin goorta ay dhasheen iyo cida iska leh toona, hooyadu waxay siisay caano laakiin sida muuqata way joojisay imaatinkeeda maalmo ka hor iyo maanta oo kaliya Waan ogaannay taas sababtoo ah way ooyaan oo si dhib yar ayey u dhaqaaqayaan, aabbahay wuxuu uga tagay caano koob ku jira laakiin mid baa ku dhacay oo ku dhintay, ma garanayo waxaan sameeyo maxaa yeelay waxay umuuqataa inay dhimanayaan
Ku jawaab Viviana Veliz
Waa salaaman tahay Viviana.
Noocyada yaryar ee noocaas ah waa inay joogaan meel raaxo leh oo diirran, maxaa yeelay ma bilaabi doonaan inay nidaamiyaan heerkulka jirkooda illaa ay ka gaarayaan laba bilood.
Intaas waxaa sii dheer, waa inay cabaan caano aan laktosi lahayn dhalada 3dii saacadoodba mar, qofna waa inuu ku dhiirrigeliyaa inuu naftiisa iska nafiso. Waxaad haysaa macluumaad dheeri ah Halkan.
Waxaan helay saddex kittens oo qiyaastii saddex toddobaad ah. Waxayna lajiraan indho isku dhegan oo infekshanku waa mid aad u foolxun mana garanayo waxaan kuquudiyo. Caawiya!
Waxaad ku nadiifin kartaa indhahooda faashad qoyan oo ku jirta faleebada chamomile, saddex jeer maalintii.
Muddo seddex isbuuc ah waxay cuni karaan bisadaha qoyan (qasacado) lagu qasay caano yar oo ah bisadaha lagu iibiyo rugaha caafimaadka xoolaha, ama biyo diirran, 3-4 saacadood kasta.
Waad salaaman tahay, waxaan hayaa bisad 40 maalmood jir ah. Waxaan siiyaa caano la dhimay biyo kaliya. Wuu fiiqaa laakiin ma saxaroodo. Waxaan haystay seddex maalmood mana garanayo haddii ay caadi tahay in caano la nuugo oo keliya, iyo in kale. Mahadsanid
Da'daas waxaad awalba cuni kartaa cunug bisad qoyan (gasacado), oo lagu qasay caano yar oo biyo ruxmay, ama biyo kaligood ah.
Si kastaba xaalku ha ahaadee, haddii uusan saxaroon, ku kici aagga xubinta taranka faashad qoyan oo biyo diirran leh 10 daqiiqo ka dib cunista. Waa inaad saxarodaa ugu yaraan hal mar maalintii.
Haddii ay dhacdo, waxaan kugula talin lahaa inaad u qaadatid dhakhtarka xoolaha.
Fadlan ii caawin! Waxaan qaatay bisad, qiyaastii laba bilood jir, toddobaad ka hor.
Waqtigan waxay kaliya rabtay inay caano cabto. Toddobaadkan, waxay kaliya saxarootay 5 jeer (Waxaan korsaday iyada Arbacada, Nofeembar 1 iyo inay saxarooto Jimcaha, Nofeembar 3, Sabtida, Nofeembar 4, Isniinta, Nofeembar 6 (2 jeer) iyo Talaado, Noofambar 7 (1 Waxaan isku dayay inaan quudiyaa tunaheeda, kitty wiskas qoyan, hilib ceyriin ah, kitty ricocat, laakiin ma rabto inay dhadhamiso midna, mana cabin biyo.
Waxaan geeyay dhakhtarka xoolaha Isniinta, Nofeembar 6, waxay qaateen heer kulkeeda, waxay ii sheegeen inay wax walba hagaagsan yihiin oo ay umuuqato inay buuxdo oo keliya, laakiin calool fadhigiisu uusan jirin, si kastaba ha ahaatee waxay ku talisay in caanaheeda lagu daro saliid saytuun ah, waan sameeyay, Laakiin waxay ahayd maalintaas oo keliya inuu laba jeer xaarroobay maalintii xigtayna (Talaado).
Wax badan ayey ciyaaraysaa, umuuqato inay jiran tahay, laakiin waxaan ka baqayaa inay xanuunsato maxaa yeelay ma ay saxarooto ama ma cuno cunnooyinka adag.
Ku jawaab Maria Patricia Peña
Salaan Maria Patricia.
Marka ay laba bilood jirto, waa inaan cunaa cuntada bisadaha ten
Waa qaali, laakiin waxaan kugula talinayaa in la siiyo Bisadda Royal Canin Baby.Kibble waa mid aad u yar oo, iyadoo lagu daboolay caano, kittens-ka waxay u muuqdaan kuwo aad u jecel. Haddii aadan heli karin ama aadan awoodin (dhab ahaantii, sicirka waa mid aad u sarreeya), raadi croquettes sida oo kale, oo leh caano.
Ikhtiyaar kale ayaa ah inaad kuqusho cuntadiisa caanaha aad siineyso.
Mararka qaarkood waa lagama maarmaan in "lagu qasbo" inay wax cunaan. Qaado xoogaa cunno ah - waa inay ahaataa mid aad iyo aad u yar - oo afkaaga geli. Kadib si tartiib ah u xir laakiin si adag. Dareen ayaa ku liqi doona. Ka dibna waxay u badan tahay inay mar hore iskeed wax u cunayso, laakiin waxay qaadan kartaa dhawr jeer oo kale.
Subax wanaagsan. Maanta afar toddobaad ka hor waxaan badbaadiyay laba yar oo yar oo yar yar oo jiray laba toddobaad (maalintii ku xigtay ayay indhaha kala qaadeen). Tan iyo xalay ma aysan rabin inay cabaan dhalo ama inay cunaan isku uruurinta caanaha, laakiin waxay xiiseynayaan inay cunaan qalalan. Ma jecla inay biyo cabaan, maxaan sameeyaa? Mahadsanid
Ku jawaab Agnes
Bil nolol ah waa inay mar hore cunaan cunto adag. Haddii ay muujiyaan xiisaha ay u qabaan cuntada noocan ah, taasi waa calaamad aad u wanaagsan.
U oggolow inay wax cunaan, laakiin ku cab caano yar ama biyo, xitaa in yar. Ama haddii kale, u dhig weel iyaga u gaar ah si ay u bartaan cabitaanka biyaha kaligood.
Waad salaaman tahay, waxaan hayaa bisad yar oo jirta ku dhowaad laba bilood (2daqad) oo aan rabin inay wax cunto wali, waxaan horeyba isugu dayay inaan siiyo paté ama buskud qoyan iyo waxba .. waan ka walwalayaa maxaa yeelay bisadeyda (hooyadeed) maya dheer maxaa la naas nuujinayaa oo miisaanka iska dhimayaa Tan kale, ma wax iska caadi ah oo aan bilaabay inaan saxaroodo maanta? (Nofeembar 25) Maxaad igula talinaysaa inaan sameeyo?
Ku jawaab Lilly
Waa salaaman tahay Lilly.
Iskuday inaad siiso cunug bisad qoyan oo lagu qooyay caano ama biyo diiran. Ama haddii kale, ka raadi raashinka bisadaha dukaanka xayawaanka lagu kariyo ee caanaha lagu qooyay, sida Bisadda Royal Canin Baby.
Haye! Waxaan qaadanay bisadaha qaar todobaad ka hor. Waxay haystaan ​​2 bilood iyo 1 toddobaad, laakiin waxay kaliya rabaan inay cunaan caano gaar ah oo loogu talagalay bisadaha, waxaan isku daynay inaan siino quudin gaar ah oo ah kittens iyo patés laakiin wax dhag jalaq ah uma siinin, waxa kaliya ee adag ee ay ka cunaan York Ham, Waxaan isku dayeynaa inaan ku qarino qaar ka mid ah jajabka quudinta York Ham, mararka qaarkood way cuneen, marar kalena way soo tufeen, laakiin wali wicitaankooda ma aysan wicin, waxaan isku dayayaa inaan ku qoyo croquettes caano gaar ah sidaan arkay faallooyinka qaarkood. Laakiin hadday taasi shaqeyn weydo, anigu garan maayo inaan sameeyo mar dambe! Maxaad igula talinaysaa inaan sameeyo? Waxaan aad ugu hamuun qabnaa inay kaligood wax cunaan, maxaa yeelay ma wada qaadan karno maalinta oo dhan iyaga sababtoo ah waan shaqeynaa. Dhamaan wanaag.
Haddii aan ku fahmo. Mid ka mid ah kittiyada aan ku haysto beerta ayaa sidoo kale soo martay waxyaabo la mid ah bisadahaaga.
Laakiin si dhakhso leh ayaa loo xaliyay iyadoo la siinayo cunto bisad yar oo caano ku jirto.
Anigu aad uma jecli inaan siiyo sumaddan, laakiin tani waa sida ay uga caawin karto inay la qabsadaan: Da'da Kowaad ee Royal Canin. Way qaali ku tahay waxa ay tahay (waxay leedahay badar iyo badarka si aad ah uma shiida bisadaha, marka lagu daro iyagu waa kuwo aad u jaban), laakiin waa fiican yihiin. Sida cunnadii ugu horeysay ee adag waa laga yaabaa inay u qalanto.
Waa salaaman tahay, waa su'aal, waxaan haystaa 2 nirigood oo waa 31 maalmood mana ogi waxa aan ku quudiyo iyo inta maalmood ee aan taaban karo.
Jawaab ku sii Antonio González
Waa salaaman tahay Antonio.
Waxaad siin kartaa cunno bisad qoyan oo lagu qasay caano bisad diiran ama biyo.
Waad taaban kartaa hadda.
Waad salaaman tahay waxaan haystaa bisad yar oo 27 jir ah, hooyadiis ayaa isaga tagtay markii uu jiray 3 maalmood, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii aan siin karo cunno adag iyo illaa iyo inta sano ee aan ku kordhinayo quudkiisa caano, maadaama mararka qaarkood uu diido dhalada ama qaniini mahadsanid
Ku jawaab yamile
Da'daas waxaad horey u siin kartaa cunno adag (jilicsan). Ku qoo caano ilaa bil iyo badh ka badan ama ka yar, ka dibna u cab qofka cabba biyo si ay ula qabsadaan.
Waad salaaman tihiin, waxaan hayaa bisad yar oo bil jirta 16/9/2018 waa 2 bilood laakiin hada kaligeed waxbay cuntaa, waxba ma dhacaan hadday kaligeed wax cuno waxaan siiyaa bisadda eyda cunnadeeda cunnana waa la jajabin doonaa sidaa darteed way jilicsan tahay iyaduna sidoo kale waxay cabtaa caano qaaciido waxba ma dhici doonaan haddii aad cuntid cuntadaas?
Haa, da'daas iyaga ayaa awalba keligood cuni kara.
Salaan, 2 maalmood ka hor waxaan qaatay bisad jirta 2 bilood, waxaan u iibiyay cunto qoyan oo qalalan si aan u kaadsho, laakiin ma rabto inay wax cunto, way uraysaa oo way voila, xitaa haddii ay gaajaysan tahay ma cunto, sidaas darteed Waxaan iibsaday caano budo ah oo ku milma biyo diirran, waxaan rabaa inaan ilaaliyo in caanuhu ay yihiin beddelkii caanaha naaska oo keligiis laga cuno baaquli, uma baahna dhalo ama wax ... su’aashaydu waxay tahay. Sideen u bari karaa inuu cuno cunnooyinka adag oo caano iska daayo?
Ka jawaab Simona
Marka hore, waxaan ku hambalyeynayaa ku -biirinta cusub ee qoyska. Xaqiiqdii waad ku raaxaysan doontaa wax badan 🙂
Marka laga hadlayo su'aashaada, 2 bilood gudahood waxaad ku bilaabi kartaa cunista cuntada bisad -qoyan. Waa inaad si fiican u jarjartid si aad ugu sahlanaato inuu calaliyo.
Haddii aad iska indho tirto ama diido, ku qoy caanaha aad cabbayso. Haddii uu cuno, kaamil ah. Toddobaadyadu markay socdaan, waa inaad ku dartaa caano aad u yar.
Haddii ay dhacdo inaysan cunin, oo tan iyo, dabcan, aad bay muhiim u tahay inay wax cunto, waa inaad si tartiib ah ugu qasabtaa laakiin sidoo kale si adag. Qaado cunto yar oo qoyan farta caaraddeeda, afkaagana geli. Maadaama ay suurtogal tahay inay ku dadaasho sidii loo eryi lahaa, waa inaad afkiisa xidhaa dhawr ilbidhiqsi, ilaa uu ugu dambayn liqo.
Intaas ka dib, waxaa laga yaabaa inay keligeed wax cunto, waxoogaa yar.